राजेन्द्रले छोराको जन्मोत्सव सहारा एकेडेमीमा मनाए, गोल्डकप लाई गरे आर्थिक सहयोग – Sahara Club Pokhara
पोखरा स्पोर्टस२६ फाल्गुन २०७७, बुधबार
पोखरा स्पोर्टस । यतिबेल पोखराका मात्रै नभई देश विदेशबाट आउनेहरुले आफ्नो परिवारको जन्मोत्सव सहारा एकेडेमीमा पुगेर मनाउन थालेका छन ।
गण्डकी प्रदेशको मात्रै नभई देशकै गौरवको रुपमा सहारा क्लवद्वारा स्थापित सहारा एकेडेमी सबैका लागि प्रेरणा बन्ने गरेकोले पनि पछिल्लो समयमा एकेडेमी पुगेर जन्मोत्सव लगाएतका कार्यक्रमहरु गर्ने प्रचलन वढ्दै गएको हो । यसै सन्दर्भमा हङकङमा रहेका राजेन्द्र गुरुङले आफ्नो छोराको जन्मोत्सव एकेडेमीमा मनाए भने आसन्न १९ औं आहा ! रारा गोल्डकपलाई पनि आर्थिक सहयोग गरे ।
राजेन्द्रले आफ्ना छोरा रेगन गुरुङको १० औ वर्षको जन्मोत्सव सहारा एकेडेमीमा आश्रित बालकहरुका विचमा मनाए । सहारा एकेडेमीमा आश्रित विभिन्न जिल्लाका २५ जना विपन्न वर्गका बालकहरु सँगको भेटघाट मात्रै नभई त्यहाँबाट नयाँ पुस्ताले पनि धेरै कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त हुने राजेन्द्रको भनाई छ । उनले भने–“सहारा एकेडेमी, एकेडेमी मात्रै होइन यो समाजका हरेक वर्गका लागि पाठशाला हो, यहाँको अनुशासन सँगै बालकहरुको फुटबल सिकाईले हामी सवैलाई प्रेरणा जगाउँछ ।”
खेलकुद प्रेमी गुरुङले निरन्तर सहारा क्लब पोखरा एवम् एकेडेमीलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । संगम क्लबका र एलजी एशोसिएसनका सल्लाहकार एवम् सामाजिक व्यक्तित्व गुरुङले आफू हङकङमा रहेपनि आफ्ना छोराको जन्मोत्सव हङकङमा रहेका तेक्वान्दो ग्राण्ड माष्टर तुल्सी गुरुङका छोरा प्रशान्त गुरुङ र सालो भई सुनिल गुरुङ मार्फत मनाएक थिए । राजेन्द्र र छोरा रेगन हङकङमा रहे पनि सहारा एकेडेमीमा रहेका बालकहरु संगै केक काटे खाना पनि खुवाए । आफूहरु जन्मभूमीबाट सात समुद्र टाढा रहे पनि छोराको जन्मोत्सव भव्य रुपमा मनाए । यो जन्मोत्सव मनाउने तरिका सबैका लागि नयाँ भए पनि भावनात्मक रुपमा जोडिनु सवैका लागि प्रेरणा रहेको सहारा क्लवका अध्यक्ष केशव बहादुर थापाले जनाए । उनले भने–“रेगनको जन्मोत्सवले मातृभूमीको मायाँ र एकेडेमीका लागि केही सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको सन्देश महत्वपूर्ण छ यसरी जोडिन पाउँदा क्लव उहाँ प्रती आभारी छ ।”
सो अवसरमा सहारा एकेडेमीमा छोराको जन्मोत्सव मनाउँदै आहा गोल्डकपका लागि नगद ३० हजार रुपैँया सहयोग गरेका छन । उनले खाद्यान्नका लागि नगद २० हजार समेत सहयोग गरे । पोखरा लालिगुराँस निवासी गुरुङ कामको सिलसिलामा हङकङमा बसोबास गर्न पुगेका थिए । तर उनको परिवारका सदस्यहरु भने यूकेमा वस्दै आएका छन । यस्तै पोखरा १० रामबजारका विकी गुरुङ (हाल हङकङ) ले जन्मदिनको अवसरमा सहारा एकेडेमी अक्षय कोषमा १५ हजार ५ सय ५५ रुपैँया सहयोग गरेका छन् ।
सहारा एकेडेमीमा आश्रित बालक कमल सोमई मगरले यूकेबाट आएका पाहुनालाई आभार प्रकट गर्दै यसरी एकेडेमीमा आएर जन्मोत्सव मनाउनु समाजका हरेक वर्गमा शुखद सन्देश जाने भन्दै फेरी अर्को वर्ष आफूहरुलाई यसरी नै फेरी भेट्न आउनका लागि शुभकामना दिए । कार्यक्रममा सहारा क्लवका पूर्व अध्यक्ष विक्रम थकाली, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय खेलकुदका पूर्व उपाध्यक्ष सुनिल गुरुङ, महासचिव रामजी अधिकारी लगाएतले समेत बोलेका थिए । pokharasports.com
सहारा यूकेको तर्फबाट आहा ! रारा गोल्डकपका लागि बेलायतबाट आकर्षक ट्रफी
इतिहास रच्दै संकटाले जित्यो आहा ! रारा गोल्ड कपको उपाधि
सागका पदकधारी खेलाडीले गरे सहारा एकेडेमीको अवलोकन